Umaki: i-joomla | Martech Zone
NgoMgqibelo, Disemba 12, 2020 NgoMsombuluko, Novemba 22, 2021 Douglas Karr
Inyanga ngayinye, ngithola izivakashi eziyizinkulungwane ezimbalwa ezibuyayo ngokusebenzisa izaziso zesiphequluli esizihlanganisile. Ngeshwa, ipulatifomu esiyikhethile manje iyavalwa ngakho-ke bekufanele ngithole entsha. Okubi kakhulu ukuthi ayikho indlela yokungenisa labo ababhalisile abadala kusayithi lethu ngakho-ke sizothatha isinyathelo. Ngaleso sizathu, bengidinga ukukhetha ipulatifomu eyaziwa kakhulu futhi enesabekayo. Futhi ngiyitholile ku-OneSignal. Hhayi kuphela
IBizible ikuvumela ukuthi uhlaziye ukusebenza kwe-Adwords yakho ngokususelwe ekuguqulweni kunokuchofozwa, okukuvumela ukuthi usebenze ngokuhlukile ne-Salesforce ukukala ukusebenza ngokuya ngomkhankaso, iqembu lesikhangiso, okuqukethwe kwezikhangiso, neleveli yamagama angukhiye. Njengoba iBizible isebenza ngokulandela umkhankaso wamanje ku-Google Analytics, ungakwazi ukulandelela kalula iziteshi eziningi kuyo yonke imikhankaso yokusesha, yezenhlalo, ekhokhelwayo, neye-imeyili neminye imikhankaso. Izici ezibalulekile ezisohlwini lwe-Bizible AdWords ROI - kukuvumela ukuthi ushaye ujule ku-AdWords